Faahfaahin: Ninkii Soomaaliga ee dadka ku dilay Masjid ku yaalla Koonfur Afrika. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Nin Soomaali ah ayaa waxa uu Khamiistii la soo dhaafay dil ka geystay Masjid ku yaalla Degmadda Malmesbury ee Galbeedka Gobalka Cape ee dalka Koonfur Afrika.
Weerarkaasi waxa lagu dilay 2 qof, halka dhowr kalena lagu dhaawacay, sida ay baahiyeen Warbaahinta Maxaliga ee dalkaasi,
afhayeenka Jaalliyadda Soomaalida ku nool dalkaasi, Amiir Shiikh ayaa sheegay in Ninka dilka geystay lagu magacaabi jirey Nuur C/lle Carraale oo lagu naanaysi jirey Nuur Turaayo, isla matkaana uu ahaa Nin dhowr jeer laga daaweeyey cuddurka Dhimirka.
Afhayeenku waxa uu sheegay inaan Nuur Turaayo lagu aqoonin Rabshado, isla markaana uu maalintaasi doonayey inuu Munaasabadda Ciiddul-fitriga ku soo qaato Gacanka Saldanah ee Xeebta Galbeed ee dalka K/Afrika.
Afhayeenka dalka Koonfur Afrika waxa uu tilmaamay inay la hadleen Qoyska Nuur Turaayo oo deggan magaalladda Muqdisho, isla markaana u sheegay Dhacdada geeridiida, waxaana la filayaa in mayka la aaso, marka ay Baarayaasha Boliska dalkaasi amraan in la aaso.
Ninka dilka geystay waxaa la sheegay inuu ahaa Gnaacsade ku nool magaalladda Bellville isla markaana uu doonayey inuu Munaasabadad Ciidda ku soo ciiddo magaalladda Vredenburg ..
Labada ruux ee lagu dilay Masjidka Malmesbury ee dalka K/Afrika waxaa lagu kala magacaabi jirey Ismaaciil Bassa, kaasi oo ka soo jeeda Bulshadda Midabka leh ee dalka K/Afrika.
Marxuumka oo da’da 70-aadka ku jiray, waxa uu degganaa albaabka ku xiga Masjidka.
Qofka 2-aad ee lagu dilay Tooreyda waxaa la oran jirey Siyaad Ibraahim Xersi oo ahaa Ganacsade aabe u ahaa 10-carruur ah.
“Waxa uu ahaa Ganacsade ku sugan Bellville, waxa uu iibin jirey Boodharka Madaxa-xanuunka (headache powder) oo ay Ddaka Reer Koonfur Afrika u yaqaanaan GRANDPA iyo kabo, wuxuuna ahaa Nin aan dhibaato lahayn” ayuu yiri Afhayeenka Jaalliyadda Soomaalida ku nool dalkaasi,
Si kastaba ha ahaatee, Ninka dilka geystay ayaa la sheegay inuu ahaa Gnaacsade dhibaato xagga DFhimirka qabay, maadaama la sheegay inay nasashadiisu yarayd.
Wasaaradda Kaluumeeysiga oo digniin u dirtay kaluumeysatada Soomaaliyeed